Fifaninanan-dahatsarin’ny Banky mondialy – Traika sosialin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2008 17:35 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, বাংলা, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nanao antso ho fanatevenana lahatsary fanadihadiana fanadihadiana 2 – 5 minitra maneho ny karazana sy ny fiantraikan'ny fioavaovan'ny toetr'andro tsy amin'ny fotoany. Amin'ny 24 oktobra 2008 ho avy izao no andro farany hametrahana izany lahatsary fanadihadiana izany. Tsy maintsy avy any amin'ny firenena andalam-pandrosoana (indrindra fa avy amin'ny tanora) izany fanadihadiana izany ary mahasahana ireto sokajy manaraka ireto:
Ady: Amin'ny fomba ahoana moa ny fiovaovan'ny toetr'andro no miteraka fahavitsian'ny akora ilaina tsy mampitombina ny toe-karena sy politika koa amin'ny lafiny sasany, ahoana no mety hahatongavan'izany ho amin'ny fikorontanana ara-tsosialy sy fandraisana fitaovam-piadiana hifanandrinana?
Fifindramonina: Misy fifandraisany ve ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fifindra-monin'ny mponina?
Politika sosialy: Ahoana ny paika hahombiazan'ny fiomanan'ny mpitondra fanjakana hiatrika ny fanambin'ny fiovaovan'ny toetr'andro?
Tanihay: Ahoana ny hiatrehan'ny fiaraha-monina hamahana ny olana vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro any amin'ny faritra makiana?
Tontolo an-tanandehibe: inona avy ny fepetra noraisina mifanaraka amin'ny filan'ny olona sahirana an-tanan-dehibe manoloana ny fiovaovan'ny toetr'andro?
Andrim-panjakana (na fikambanana) ambanivohitra: Inona avy ny paika sy ny fitaovana ampiasain'ny solontenam-panjakana any amin'ny fokonolona mpamboly hamehezana ny voka-dratsin'ny fiovaovan'ny toetr'andro?
Fokonolona: Ahoana ny hiatrehan'ny fokonolona sy izarany ny fiovaovan'ny toetr'andro?
Lahy sy ny vavy : inona avy ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro eo amin'ny lahy sy eo amin'ny vavy na kely io na lehibe (na samihafa ve ny fiantraikany eo amin'ny lahy sy eo amin'ny vavy?) ary aiza sy amin'ny fomba ahoana no ahitana izany fahasamihafana'ny fiantraikan'ny toetr'andro izany eo amin'ny tsirairay?
Fitantanana: Ahoana no atao handraisan'ny fiaraha-monina andraikitra amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro?
Ala: Inona avy ny tahotra sy ny tombotsoa azon'ny fiaraha-monina an-toerana amin'ny ezaka hampihenana ny famotehana ny ala syny fahasimban'ny nofontany?
Zon'olombelona: Aiza ho aiza no mety hampisy fiantraikany eo amin'ny fampanajana ny zon'olombelona ny fiovaovan'ny toetr'andro?
Azonao jerena eto.to ny antsipirian'ny fifaninanana. Ao amin'ny lahatsoratra nadika kosa ny lahatsarin'ny antso ho fandraisana anjara amin'ity fifaninanana ity.